Hihatra ny 1 novambra: 600 Ar ny saran-dalana Ivato-Tana | NewsMada
Hihatra ny 1 novambra: 600 Ar ny saran-dalana Ivato-Tana
Raikitra ny fampiakarana saran-dalana eny Ivato. Samy miandriandry izay hiseho ny mpandeha. Ho hita eo na mbola sahy hihodina tapa-dalana na hanara-dalàna ireo mpamily.
Araka ny efa fampilazana nataon’ny mpitatitra sy ny tapaka niaraka tamin’ireo ekipan’ny ATT, hihatra, manomboka rahampitso 1 novambra, ny fampiakarana saran-dalana ho 600 Ar ho an’ny zotra mampitohy an’Ivato mankeo Vassacos.
Feno ny 15 andro nampahafantarana ny mpanjifa, araka ny lalàna efa napetraka ka hihatra amin’izay ny fampiakarana saran-dalana. 500 Ar avokoa ny saran-dalana ho an’ny tapa-dalana rehetra na dia fihatoana roa monja aza ny elanelana. Tsy misy intsony ny 400 Ar, 300 Ar sy ny 200 Ar.
Tsy sarotiny ny mpandeha amin’ity fampiakarana saran-dalana ity. Miandry fatratra ny fiovan’ny fomba fiasan’ireo taxi-be kosa izy ireo manomboka eto. Toraka izany ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, toy ny mpitandro filaminana, ny kaoperativa…
Anisan’ny zotra mampimenomenona ny mpanjifa ny zotra mampitohy an’Ivato. Sady ratsy ny tolotra no tsy mahalala fomba sy tsy refesi-mandidy ireo mpamily sy ny mpanampy azy.
Efa ela ny nampitaraina ny olona ity zotra ity, saingy tsy misy ezaka amin’ny fanovana ny fomba fiasa ireo tompon’andraikitra mahefa fa miraviravy tanana avokoa.
Anisan’ny soson-kevitry ny mpanjifa ny tokony hampidirana mpifaninana hafa satria manjaka tokana ireto zotra ireto ka manao izay danin’ny kibony ary mampijaly ny vahoaka amin’iny tapany andrefan’Antananarivo iny.
Afaka misafidy, araka izany, ny mpanjifa amin’izay zotra tiany handehanana. Misy ihany koa ny fifaninanana amin’ny tolotra sy ny kalitao ka hojeren’ny mpanjifa eo fotsiny izay zotra tsy mahafa-po azy.
Ato ho ato, hisokatra ny lalana mampitohy mivantana amin’Ivato mankeny Tsarasaotra ka fanirian’ny mponina ihany koa ny hisian’ny fitaterana amin’izany lalana vaovao izany.